Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida oo Amar culus soo saartay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida oo Amar culus soo saartay
Muqdisho (Halqaran.com) – Gudoomiyaha Maxkamada Ciidanka Qalabka Sida ee darajada Koowaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku amray ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan Galmudug in ay gacanta ku soo dhigaan kooxaha dilalka ka geysta gobolka Galgaduud.
Shuute ayaa amar ku bixiyay in la soo qabto oo caddaaladda la horkeeno kooxihii ka dambeeyay dilkii dhawaan loogu geystay degaan hoos yimaada degmada Balanbale shan qof oo shacab ah.
Guddoomiyaha maxkamadda Ciidanka qalabka Sida ayaa waxa uu tilmaamay in sidoo kale la soo qabto kooxihii dilay lix sarkaal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka.
Ugu dambeyn, Sidoo kale wuxuu xusay guddoomiye Xasan Cali Nuur Shuute, in dowladda Soomaaliya ay howlgalin doonto ciidamo gaar ah oo loogu tala galay in ay la shaqeeyan Maxkamaddaha si loo soo qabto dambilayaasha.
kooxo dil geystay
Maxkamadda Ciidamada qalabka Sida